Home Wararka Maanta XOG: Galaagalka Imaaradka Carabta ee Soomaaliya iyo damaca uu ka leeyaay doorashada...
XOG: Galaagalka Imaaradka Carabta ee Soomaaliya iyo damaca uu ka leeyaay doorashada dalka
Dalka isku-tagga Imaraadka Carabta, ayaa billaabay galangal siyaasaded oo xoogan wax yar kadib markii Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya, Maxamed Xuseen Rooble, sheegay, in Xukuumaddiisu dib u celin doonto lacag ay Farmaajo, Kheyre iyo Fahad Yaasiin, ka dhaceen Imaaraadka 2018.
Wixii markaas ka danbeeyay Imaaraadka, ayaa billaabay dhaqdhaqaaq siyaasadeed, waxaana safarro qarsoon Dubai ku tagay, Madaxweynayaasha Jubbaland iyo Puntland, Axmed Madooble iyo Siciid Deni, kuwaas oo cagta soo mariyay Kenya, ka hor inta aysan dib ugu soo laaban dalka.
Billawgii bishaan Safiirka imaaraatka Carabta u jooga Muqdisho, Maxamed Al-Cusman, ayaa markii ugu horreysay ka qeyb galay kulan ay Wakiillada Beesha Caalamka la qaadanayeen Golaha Wadatashiga Qaran kaas oo ku soo aadday wax yar ka dib raalli galintii Ra’iisul Wasaaraha.
Xukuumadda Dubai, ayaa dooneysa in ay meesha ka saaro Kooxda waqtigu ka dhamaaday ee Farmaajo hoggaamiyo, kuwaas oo isku hor gooyay mashaariicdii UAE ee Soomaaliya, iyaga oo fulinaya danaha gaarka ah ee dowladda Qatar.
Safarka Rooble, oo ku qotoma u jeeddo siyaasadeed oo mug adag, ayaa imaanaya afar sano kadib, safarkii uu Ra’iisul Wasaarihii hore Xasan Cali Kheyre, kaga soo laabtay Dubai, markaas oo todobaadyo kadib, si ula kac ah loo xumeeyay xiriirka labada waddan.
Xogo hoose, oo ay heshay Badweytims ayaa sheegaya in Imaaraadku, sanadkaan diiradda saari doonaan dhisidda dhowr Musharrax, kuwaas oo ka mid ahaa mucaaradka Farmaajo, waxaana musharixiintaas ku jira mid ka mid ah Madaxda Maamullada.
Dubai waxa ay loollan adag la gali doontaa Dooxa, oo dooneysa in ay dib u soo celisho rajiimka Farmaajo, wuxaana sanadkaan si weyn loo dareemi doonaa loollanka dalalka carbeed, marka loo dareeyo doorashada Madaxweynaha Soomaaliya.
Badweytims ayaa ahayd war-baahintii ugu horreysay oo baahisay in Ra’iisul Wasaare Rooble, u socdaali doono Imaaraadka, halka aan 20 cisho ka hor aan bulshada la wadaagnay in in inta badan Madaxda Maamulladu, ay u kala safrayaan dalalka Turkiga, Qatar, Kenya iyo Imaaraadka.
Xogo aan ka heleyno Madaxtooyada ayaa sheegaya in Xaafiiska Farmaajo, isku diyaarinayo in dib loo soo faago heshiis uu baarlamaankii 10-aad ku go’aamiyey in DPWORLD oo laga leeyahay Imaaraatka Carabta laga saaro Soomaaliya, kaas oo ilaa 12-March-2018, uusan saxiixin Madaxweynihii hore.
Farmaajo, intii uu xaafiiska joogay wuxuu dadaal kasta ku bixiyay sidoo uu ku hor istaagi lahaa, mashaariicda Dowladda Imaaraatka ka fuliso Soomaaliya, wuxuuna meesha ka saaray kabkii miisaaniyadeed, howlihii caafimaadka, fududeyntii dal ku galka, tababarkii ciidanka iyo adeegyadii kale oo ay qaban jireen.
Sida ay sheegayaan xogaha ganacsi, Somaaliya iyo Imaaraadka sanadkii la soo dhaafay waxaa dhexmaray ganacsi ka badan $1.7 bilyan, taas oo ka dhigan in Imaaraadku yahay mid ka mid ah waddama ugu badan ee ganacsatada Soomaaliyeed wax ka iibsadaan.